Ngo-January 1, 2011 umthetho uzokunakekela ukukhuphuka kwezinga amaholo kanye nezinzuzo ahlukahlukene amasosha. Maduze nje, emhlabeni impesheni lempi bayoba futhi ozoba nokwanda okuphawulekayo izinzuzo imali, okuyinto kungenzeka ukwethula nenani impesheni bayovuka mayelana 1.5 izikhathi. Kuyinto naye ngala mazwi, wanika UNdunankulu uVladimir Putin emhlanganweni chairmen woMkhandlu eziningi elisentshonalanga, okuyinto iqoqo omakadebona impi nabasebenzi, eyayihlelwe Boris Kosenkov. Lo mhlangano senzeka lesifunda reception zomphakathi ehola iqembu "United Russia", futhi isihloko yayiyini inkinga impesheni ubuncane for servicemen umhlalaphansi.
Ngaphezu kwalokho, kulo mhlangano babebhekwa njengabangakufanelekeli njengoba impesheni lempi, nokukhuphula ukwaneliseka ngoba ezinye izakhamuzi. Usihlalo Kosenkov bakhononda ngokuthi ngokuvamile yempesheni okhona manje wezempi aphansi ngisho nangaphezu izimpesheni zabantu abasebenza ezimbonini. "Manje, ngaphezulu kwanoma 85% owayengunkosikazi amasosha uvame ukuthola impesheni e isamba ruble ayizigidi 7-8," - wathi umhleli womhlangano. Futhi, uma ubheka iphrojekthi zomthetho ku impesheni lempi, kuyabonakala ukuthi impesheni lempi izikhulu junior yisilinganiso sesifundo ruble ayizigidi 4-5, kuyilapho impesheni isilinganiso zabasebenzi ngo-2011 kuleliya lizwe ruble ezingaphezu kuka-8000. Ngakho, wezempi esizayo ayinakho amathemba e-yokwemukela umsebenzi wezempi.
Ukuphendula isitatimende Prime sobudala ezinjalo wathi wayeqinisile, futhi manje isimo ngempela impesheni lempi ayihambisani izimiso esakha ezinsukwini zakudala. Kodwa uNdunankulu kuqashelwe ukuthi ukwanda wempesheni lempi izobanjelwa esikhathini esizayo esiseduze, futhi le nkinga uzoqhubeka kubuswa kuye.
Uma ubheka isimo eRussia, yempesheni ezempi ngo-2011, noma kunalokho 3 lokuqala izinyanga zomnyaka, akushintshanga kangako, futhi kancane kancane kuka-40% kwabahola impesheni ezempi manje ukuthola impesheni, okuyinto ephansi kakhulu kunalokho impesheni yomhlalaphansi. Kodwa eqinisweni, kusekhona isinqumo sokugcina endabeni amazinga okwandayo impesheni lempi awamukelekile. Kodwa eMnyango Wezokuvikela kanye Ministry of Finance, kanye nezinye izinhlaka nesithakazelo kule ndaba, eyenziwa ibala njalo, okuyinto embulele ukwanda impesheni yabo lamasosha. Kodwa, njengoba uNdunankulu ethenjisiwe, ukhulisa ngaphansi kuka 1.5 ngeke ngqo. Esikhathini esizayo, Ministry kuhlelwe ukuthi izimpesheni lempi izokwenyuka njalo futhi kancane kancane ukungena sesibopho ukuthobisa ezingeni izibonelelo ngokugcwele umholo ngesikhathi kule nkathi yesikhathi ezempi.
Ngenxa yalokho, i-Government kuhlelwe ukuze babhale uhlu imithetho edingekayo lapho isamba inkokhelo eyengeziwe kuyoba hhayi ngaphansi kuka ruble 1000. Kuyaphawuleka ukuthi ubukhulu samanje eliqinisekisiwe ukuze kwezempi ruble 240. I Uhulumeni uhlela ukwandisa impesheni lempi ukwaba ruble ezingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingu-8. Lawa UNdunankulu ufuna ukusebenzisa umthetho izinhlelo kulo nyaka. Iphephandaba "Whistle" ibika ukuthi ngo-2011, nokwanda impesheni lempi uzothola lo jantshi, okuzokwenza kulo nyaka iya ngeholide.
Kuyaphawuleka ukuthi umgomo oyinhloko okuqanjwa kabusha isimiso lube lwenta ncono lizinga non-state impesheni yabo bonke abombutho umhlalaphansi. Ngakho ukuthi izindlela ezihlukahlukene, ezifana ukwethulwa yenkampani amabhonasi nempesheni kumele ufake kakhulu emthethweni impesheni nemikhuba yebhizinisi yempesheni zonke zezinkonzo. Umuntu kumelwe amane nihlalele isithembiso yazo zonke Ohulumeni kwethu zayo zempi.
Ngakho lokho uzobe elinde ushintsho olandelayo.